Fampandehanana kianja madinika 35 Madrid - Torres Bus Fampandehanana kianja madinika 35 Madrid - Torres Bus
Fampandehanana kianja madinika 35 Madrid - Torres Bus
Fandefasana kianja madinika 35 madinika Madrid Ahoana no maha-izy azy ireo?
La Fiara fandraisam-bahiny mini-bus an'ny Madrid, antsoina hoe Torres Bus, SL no iray amin'ny tsara indrindra orinasa ao amin'ny sehatry ny fitaterana ireo mpandeha, izay ahitana ireo mpamily tsara indrindra ary miantoka ny asany. Ny fanomezana ny tsara indrindra ho an'ny mpanjifany ary noho izany dia mahazo taona matoky ny sehatry ny fitaterana ireo mpandeha.
Iray amin'ireo tolotra Ny tena miavaka amin'ity orinasa ity dia ny famerenana minibus an'ny seza 35, miaraka amin'ny mpanatanteraka Citytours manerana ny faritra Madrid y Toledo; ary koa ny iray amin'ireo tolotra izay matetika no atao amin'ny minibus avy amin'ny seza 35 Izy ireo dia ny fifindrana manerana ny tanàna na ny seranam-piaramanidina Adolfo Suarez Madrid ao Barajas ary miaraka amin'ny fanatanterahana fitsangantsanganana miaraka amin'izany.
Ahoana no ahafahako manofa minibus avy amin'ny 35 ho fampakaram-bady?
Mora, araho ny fepetra etsy ambany dia mameno ny endrika ary hamaly araka izay azo atao
Raha mitady sehatra na mikrô ny seza 35 ianao, dia ao amin'ny tranonkala havanana, satria ny fisavana ireo karazana fiara ireo, no tena nangatahana indrindra ho an'ny fampakaram-bady, ny seranam-piaramanidina sy ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana ao Espaina.
Raha manana fanontaniana ianao, aza misalasala miantso, amin'ny 34 607 372 252, na tsindrio ny bokotra amin'ny telefaona
Tetibola minibus an'ny seza 35
Ny fomba tsotra indrindra hiantsoana ny antsipiriany amin'ny fipihana ny sary
Nahoana isika no tsara indrindra amin'ny fotoana handraisana ny tranokala fivarotana 35?
Ny olana hafa izay tsy maintsy lazaintsika fa iray amin'ireo orinasa tsara indrindra amin'ny sehatra, izay novokarin'ny zavatra telo: - ny voalohany satria manana ny tsara indrindra 35 mitahiry bus ireo vaovao ao amin'ilay sehatra, izay amidy ny sehatra iray manontolo sy ny sary hosodoko, ka manome lanja kokoa ny orinasa sy ny fombafomba, - ny faharoa dia ny tsirairay avy amin'ny Bisy 35 seza Manana ny teknôlôjia farany ao anatiny izy ireo, izay manatsara ny fampiasana Wi-Fi raha ilaina sy an-tanan-draharaha, ary koa ny fananganana TV amin'ny fahitalavitra mba hijerena sarimihetsika amin'ny làlana goavana, ka hanome fahafaham-po kokoa ny mpandeha.
Ary ny fahatelo fa tsy ny kely indrindra, ny fiaramanidintsika dia manana mpamily tsara indrindra, izay manatanteraka ny asa rehetra ataontsika, mamela ny fahamendrehantsika sy ny fomba fiasantsika tsara.
Professionalism amin'ny fiara sy fiteny roa
Amin'ny lafiny iray, ny tsirairay amin'ireo mpamily antsika dia mahafantatra ny fomba fiteny sy ampiasaina amin'ny fiteny vahiny vahiny sy iraisam-pirenena; Anglisy ary amin'izany dia afaka manokatra ny tenantsika any amin'ny tsena iraisam-pirenena isika, manolotra tolotra ho an'ny daholobe ary noho izany dia afaka mahazo ny kalitao tsara indrindra amin'ny serivisy.
Raha mitady vondron'olona amin'ny vidiny amin'ny serivisy ianao, dia tsy nandany ny fotoananao hitadiavana orinasa iray hafa izay hanolotra anao ny fifanolanana ratsy kokoa raha manoloana ny tolotrareo satria misy vidiny mora kokoa izany; satria anay dia toy ny hoe avy amin'ny fianakavianao ianao; Aza misalasala intsony ary manakarama ny tolotrareo 35 mitahiry bus miaraka amin'ny orinasa.
Raha irinao, manorata anay mailaka, mampahafantatra anay ny fampahalalana tianao hatao amin'ny dianao info@torresbus.es ary hamaly anao ny vahoaka.
Aza misalasala, aza mandany fotoana sy mikarokaroka, ary avelao izahay hankafizinao ny traikefa goavana amin'ny dia mahafinaritra.
Manaova anay, miala sasatra ary mankafy ny fotoana izay niandrasako ela.
Ny fomba tsara indrindra hanehoana ny mpanjifanay dia ny fitokisany.
Torres bus, SL fampandehanana minibus an'ny seza 35.
Mividy efitrano madinika 35 madrid avy madrid
Microautobus 35 Seza OPALIN
Ny vidin'ny fampandehanana ny kianja madinika madinika 35 Madrid dia iray amin'ireo lanjan'ny sekolim-panabeazana tsara indrindra ho an'ny fitsangatsanganana
Tsidiho ny isa 4.8 / 5 amin'ny 5 ho an'ny seza sy minibus 25 mikroba
Fampandehanana kianja madinika 35 Madrid - Torres Bus Janoary 22nd, 2018Fampiofanana mpampiofana